Fusion Solar: Huawei's technology kacaan ee tamarta qoraxda | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Tamarta cadceedu waxa ay ku qasantahay tignoolajiyada kacaanka si ay faaiidada ugu badan u hesho. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadli doonaa Fusion Qorraxda. Waa jiilka soo socda xal sawirovoltaic deganan caqli badan oo Huawei uu hindisay. Fikradan kacaanku waxay xooga saaraysaa tignoolajiyada casriga ah iyo kuwa cusub si loo bixiyo heerarka rakibida ugu fudud iyo badbaadada ugu sareysa iyo ku shaqaynta muddada dheer. Ujeedada ugu weyn ee Fusion Solar waa in guri uu yeelan karo 100% is-isticmaalka.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Fusion Solar, sifooyinka iyo ujeedooyinka ugu muhiimsan.
1 Waa maxay Fusion Solar
2 Muxuu ka samaysan yahay nidaamka Fusion-ka Cadceedda?
4 Faa’iidooyinka tamarta qoraxda
Waa maxay Fusion Solar
Huawei wuxuu bilaabay jiilka soo socda xal sawirovoltaic smart "FusionSolar", isagoo xoogga saaraya tignoolajiyada casriga ah ee casriga ah, oo siinaya heerarka rakibida ugu fudud, amniga ugu sarreeya iyo shaqeynta muddada dheer, iyo hadafku waa 100% is-isticmaalka gudaha. Nidaamyada saqafka sare ee guryaha ee PV waa inay buuxiyaan baahida sii kordheysa ee isticmaalkeeda. Sababtan awgeed, nidaamyada kaydinta tamarta ka fiican ayaa loo baahan yahay.
Nidaam loogu talagalay milkiilayaasha guryaha iyo rakibayaasha xirfadlayaasha ah. Rakibayaasha deegaanku waa inay siiyaan mulkiilayaasha nidaam awood leh oo mustaqbalka ku jihaysan is-isticmaalka kaas oo ilaalinaya hufnaan sare, dabacsanaan iyo rakibid degdeg ah, oo bixisa xalal caqli-gal ah oo daboolaya baahiyaha adeegga isticmaalaha iyo macaamiisha, sida ogaanshaha fogaanta ee guul-darrooyinka, si loo gaaro wax badan. Wanaagsan oo dayactir yar.
Huawei waxa uu isku daraa tignoolajiyada dhijitaalka ah iyo interneedka ee u dambeeyay iyo tignoolajiyada qoraxda la degan yahay. Farsamadani waxay ku siinaysaa hagaajinta tamarta sawir-qaadista, Isku xirka batari plug-iyo-cayaar iyo maaraynta awooda guriga ee smart.
Nidaamka cusub ee is-isticmaalka guryaha, tamarta photovoltaic ee ay dhaliyaan baararka qoraxda waxay daboolaysaa baahida koronto ee guriga inta lagu jiro maalinta, tamarta soo hartayna waxaa loo isticmaalaa in lagu dallaco batteriga ka dibna la soo saaro si loo daboolo baahida ugu badan ee korontada. Dalab koronto habeenkii ama maalintii. Sidan oo kale, nidaamyada sawir-qaadista guryaha waxay gaari karaan heer sare oo is-isticmaalka ah waxayna sare u qaadaan isticmaalka saqafka si ay u helaan tamar badan.
Muxuu ka samaysan yahay nidaamka Fusion-ka Cadceedda?
Nidaamku wuxuu ka kooban yahay qaybaha soo socda:
Xarunta tamarta casriga ah: Inverter waxtarka sare leh, oo leh hufnaan 98,6%. Isku xirka kaydinta tamarta isku dhafan ayaa la isticmaali karaa isla markiiba.
Wanaajinta baytariga casriga ah ee sawir-qaadka: 99,5% hufnaan. Ku dhaaf baalal badan saqafka kasta si aad u hesho waxqabadka nidaamka sare. Rakibaadda si dhakhso ah ugu rakib bakhaarka iyo wakhtiga rakibidda saqafka ayaa noqon doona mid gaaban. Kormeerka fog
Nidaamka maamulka: si fudud uga hel xogta aaladaha mobilada. Warbixinada firfircoonida leh ee dhacdooyinka iyo digniinaha. Maaraynta dhexe ee nidaamka unugyada sawirkavoltaic.
Ammaanka unugyada sawir-qaadka ee casriga ah: kala xidhiidh optimizer-ka adigoo isticmaalaya MBUS. Waxay taageertaa la socodka wakhtiga-dhabta ah iyo qaybaha maamulka.
Battery smart LUNA2000 degan yahay ayaa iftiiminaya xalka Huawei markan. Batarigu waxa uu isticmaalaa baytariyada fosfateed birta lithium si kor loogu qaado badbaadada. Waxay qabataa naqshad qaabaysan waxayna taageertaa balaadhinta tamarta dabacsan (5-30 kWh). Baakad kastaa waxay leedahay hagaajin koronto oo ku dhex jirta si ay u taageerto kharashaadka madax-bannaan iyo maaraynta sii deynta.
Nidaamka Fusion Solar wuxuu bixiyaa kor u kaca awoodda sawirkavoltaic ee ikhtiyaarka ah kaas oo xaddidi kara dhibaatooyinka hadhka deegaanka oo awood u siinaya isticmaalka hababka sawir-qaadista si wax ku ool ah loo geeyo saqafyo isku dhafan oo isku dhafan.
Sida laga soo xigtay shirkadu, optimizer-ka loogu talagalay Huawei wuxuu kordhin karaa waxtarka tamarta ee qaybaha sawir-qaadista ilaa 30% iyadoon loo eegin hooska iyo jihada waxtarka hoose.
Sirdoonka Artificial Driven Arc Fault Circuit Breaker (AFCI) waxay si firfircoon u yaraynaysaa khatarta dabka iyada oo loo marayo tignoolajiyada xidhitaanka degdega ah, gaadhsiyaa koronta saqafka eber iyo eber khatarta arc, oo uu gaaro ilaalinta laba lakab.
Codsiga nidaamka waa saqafka guryaha. Nidaamka maaraynta sawir-qaadista ee smart wuxuu bixiyaa socodka tamarta waqtiga-dhabta ah iyo akhrinta dheelitirka tamarta, iyo sidoo kale maaraynta waxqabadka ee muraayadaha sawir-qaadista.
Xulashada habaynta habka xakamaynta waxaa ka mid ah is-isticmaalka ugu badnaan, mudnaanta ka sarraysa wax-soo-saarka shabaggadda, mudnaanta kaydinta PV, mudnaanta ka sarreysa duritaanka tamarta PV ee xad-dhaafka ah ee shabkada. Nidaamka waxaa loo habeyn karaa si macaamiishu waxay si toos ah u isticmaalaan tamar badan marka qiimuhu hooseeyo oo si toos ah u badbaadi marka qiimuhu sarreeyo.
Aynu aragno faa'iidooyinka isticmaalka nooca tamarta ah:
Waa tamar gebi ahaanba nadiif ah oo kaa caawinaysa in si weyn loo yareeyo raad-raaca kaarboonka. Thanks to isticmaalkeeda waxaan ka fogaannaa soosaarka gaaska aqalka dhirta lagu koriyo mana nijaaseyno inta ay jiilkooda yihiin ama inta ay isticmaalayaan. Waxa jira wasakh yar oo kaliya marka la abuurayo baalasha qoraxda.
Si ka duwan tamarta kale ee la cusboonaysiin karo, tamartani waxay kuleylin kartaa waxyaabo.
Uma baahna nooc kasta oo ka mid ah soo saarista joogtada ah ee alaabta si ay ugu shaqeyso. Tani waxay ka dhigaysaa tamar aan qaali ahayn oo maalgashigeeda bilowga ah ay fududahay in la soo kabsado sannadihii la soo dhaafay. Waa run in mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu muhiimsan ee tamarta dib loo cusboonaysiin karo tan iyo markii la aasaasay ay ahayd maalgelinta bilawga ah iyo heerka soo noqoshada, inkasta oo tani aysan hadda dhicin iyada oo ay ugu wacan tahay horumarinta tignoolajiyada. Qalabka cadceedda waxay si fiican u haysan kartaa nolol waxtar leh oo 40 sano ah.
Iftiinka qorraxdu aad buu u badan yahay oo waa la heli karaa markaa isticmaalka muraayadaha cadceedda waa ikhtiyaar macquul ah. Ku dhawaad ​​goob kasta oo juquraafi ah oo meeraha ku taal waxay isticmaali kartaa tamarta qorraxda. Waxaa muhiim ah in la ogaado in mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee tamarta qoraxda ay tahay inaysan u baahnayn fiilooyinka. Tani waxay ka caawisaa in lagu rakibo meelaha ay adag tahay in lagu rakibo fiilooyinka noocaas ah.
Faa'iidada kale ee tamarta qoraxda ayaa ah in ay yareyso baahida loo qabo isticmaalka shidaalka fosil, sidaas darteed waxay gacan ka geysaneysaa ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah iyo yareynta wasakhowga deegaanka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto Fusion Solar iyo sifooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Qoraxda Photovoltaic » Fusion Qorraxda